Xildhibaano shaaciyay in xilka ka qaadeen Gudoomiyihii Baarlamaanka Galmudug | Baydhabo Online
Ilhaan Cumar oo loo heysto hadal ay Soomaalida ku...
Hogaamiye Kim Jong Un oo booqasho Taariikhi ah ku tagaya dal Yurub katirsan
Dowladda Soomaaliya ma furin dagaal oo horleh ayaa ku furantay?
Madaxweynaha JFS iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Masar
Soomaaliya: In Maamul goboleedyada ay la macaamilaan beesha caalamka ma dan baa mise dib u noqosho?
Xildhibaano shaaciyay in xilka ka qaadeen Gudoomiyihii Baarlamaanka Galmudug
Wararka ka imaanaya magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in Xildhibaano katirsan Baarlamaanka maamulkaasi una badan garabka Kooxda Ahlu Sunna xilka ka qaadeen Gudoomiyihii Baarlamaanka maamulkaasi.
Xildhibaanada ku shiray magaalada Dhuuso Mareeb ayaa tiradooda lagu shegay 147- waxa ayna Xildhibaanadan dood kadib cod u qaadeen Gudoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Galmudug Cali Gacal Casir.
Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa sheegay in Xildhibaano gaaraya 146 ay codka kalsoonida kala noqdeen Gudoomiye Cali Gacal, halka uu ka aamusay hal Xildhibaan.
Cali Gacal Casir Gudoomiyaha la sheegay in xilka laga qaaday ayaan wali ka hadlin kulanka ka dhacay Dhuuso Mareeb ee xilka looga qaaday, waxa uuna horey u sheegay in Xildhibaano uu aqoonsan yahay aysan joogin Dhuuso Mareeb.